प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र २९, २०७४ समय: ८:३०:०५
काठमाडौं / सरकारले यातायात सेवा समितिहरू खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । संघसंस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सेवा समितिहरू यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाद्न सक्रिय रहेको निष्कर्षसहित सरकारले खारेज गर्न खोजेको हो ।गृह मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका यातायातसम्बन्धी कुनै पनि सेवा समिति नवीकरण गरिनेछैन । सरकारको कदमबाट ३ सय ५ यातायात सेवा समिति खारेज हुनेछन् ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ भने सरकारी कदमको विपक्षमा छ । महासंघ अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्यले विनातयारी सरकार समिति खारेज गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘सरकार सेवा समिति खरेजीमा लागेको सुन्नमा आएको छ । सरकारले यो काम विनातयारी गर्दै छ । मुलुकभर ३ सय ५ सेवा समिति छन् । त्यससँग करिब २ लाख बस छन् । समिति खरेजीपछि उनीहरू कहाँ जाने ? कम्पनीमा दर्ता गर्न पनि समय त चाहियो नि ? यसको खाका के हो ? यी सबै पक्षको टुंगो नलगाई खरेजीको काम भइरहेको छ । हामी विरोधमा छौँ ।’अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।